Iza no mamaritra ny hetsika ataontsika - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Iza no mamaritra ny ataontsika?
Ny ankamaroantsika dia tia ny fiheverana fa mifehy ny fiainantsika isika. Tsy mila olon-kafa holazaina ao an-tokantranontsika, fianakaviantsika na vola ara-bola isika, na dia tsara aza ny mahazo tsiny raha misy zavatra ratsy. Rehefa mieritreritra isika fa tsy mahafehy ny raharaha amin'ny toe-javatra manokana, mahatsiaro tsy mahazo aina sy matahotra isika.
Heveriko fa rehefa mamaky fandikana Baiboly sy boky vitsivitsy tsy maintsy eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina isika dia mahatsiaro tsy mahazo aina. Fantatro fa Andriamanitra, amin'ny heviny lehibe, dia mifehy ny zavaboariny rehetra. Anany misy fahefana hanao izay zavatra rehetra tiany. Fa "mahafehy" ahy ve izy?
Raha manao izany izy dia ahoana no mety miasa? Toy izao ny eritreritro: rehefa nanaiky an'i Jesosy ho Mpanavotra ahy aho ary nanolotra ny fiainako ho an'Andriamanitra, dia teo ambany fifehezan'ny Fanahy Masina aho ary tsy nanota intsony. Saingy satria mbola mpanota aho dia tsy afaka feheziny. Ary, raha tsy eo ambany fifehezany, dia mila manana olana toe-tsaina aho. Saingy tsy te-hamoy ny fiainako aho. Manana olana toe-tsaina aho. Toa mitovy amin'ilay faribolana mahatsiravina nolazain'i Paul ao Römer izany.
Fandikana vitsivitsy (anglisy) vitsivitsy ihany no mampiasa ny teny hoe control. Ny hafa kosa mampiasa fehezan-teny mitovy amin'ny mitarika na mandeha amin'ny saina. Mpanoratra maro no miresaka momba ny Fanahy Masina amin'ny heviny hoe mifehy. Satria tsy mpankafy tsy fitoviana eo amin'ny fandikan-teny aho, dia te-hidina amin'ny farany ambanin'ity raharaha ity. Nangataka tamin'ny mpanampy mpikaroka (ny vadiko) aho mba hitady ireo teny grika ho ahy. Ao amin'ny Romana 8, andininy faha-5 ka hatramin'ny faha-9, ny teny grika nadika hoe fifehezana dia tsy ampiasaina akory! Ny teny grika dia "kata sarka" ("manaraka ny nofo") sy kata pneuma ("aorian'ny fanahy") ary tsy misy fifehezana. Izy ireo dia maneho vondron'olona roa, ireo izay mifantoka amin'ny nofo fa tsy mitolo-batana amin'Andriamanitra, ary ireo izay mifantoka amin'ny saina ary manandrana mampifaly sy mankatoa an'Andriamanitra. Ny teny grika amin'ny andininy hafa izay niahiahako ahy dia midika koa fa tsy mifehy.
Ny Fanahy Masina tsy mifehy anay; tsy mampiasa herisetra mihitsy izy. Izy dia mitari-dalana antsika moramora rehefa milefitra aminy isika. Miteny amin'ny feo tony sy malefaka ny Fanahy Masina. Anjarantsika no mamaly azy.
Ao amin’ny Fanahy isika rehefa mitoetra ao anatintsika ny Fanahin’Andriamanitra (Romana 8,9). Midika izany fa miaina araka ny Fanahy isika, miara-mandeha Aminy, mikarakara ny an’Andriamanitra, manaiky ny sitrapony eo amin’ny fiainantsika ary tarihiny.
Manana safidy mitovy isika, toa an'i Adama sy Eva, afaka misafidy ny fiainana na afaka misafidy ny fahafatesana. Tsy te hifehy antsika Andriamanitra. Tsy mila milina na robot izy. Tiany isika hisafidy ny fiainana ao amin'i Kristy ary mamela ny fanahiny hitari-dalana antsika mandritra ny fiainana. Tena tsara kokoa izany satria raha manimba sy manota ny zava-drehetra isika dia tsy afaka manameloka an'izany Andriamanitra. Raha manana safidy isika dia tsy misy na iray aza isika.